Napa Gem Suites | 1 Bedroom Suite - I-Airbnb
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sky Prime
U-Sky Prime Ungumbungazi ovelele
Ngokuqasha iholide eliqhele ngebanga lezinyawo kwelinye lamabhishi amahle kakhulu e-Cyprus nazo zonke izinto ezijabulisayo nezijabulisayo ze-resort yasehlobo ephithizelayo yase-Ayia Napa, i-Napa Gem kunzima ukuyishaya. Itholakala enkabeni ye-resort futhi yimizuzu embalwa nje yokuhamba ukusuka endaweni enesihlabathi esishisayo. Kudingeka idiphozithi yokuphuka ebuyiselwayo engu- € 300 ngokuhlala ngakunye.
Leli fulethi elinekamelo elilodwa e-Napa Gem Suite lingathatha izivakashi ezingaba ngu-3, lizinikeze indawo enkabeni ye-Ayia Napa. Wonke amasevisi ansuku zonke kanye nezihlabathi ezinoshukela zale resort ethandwayo ziphakathi kwebanga lokuhanjwa ngezinyawo.
I-Napa Gem Suite ihlanganisa izakhiwo zesimanje ezinezitezi ezimbili ezinendawo yokubhukuda engenakuphikiswa egcinelwe abahlali. Indlu enhle inikeza ukukhetha kwamafulethi ngosayizi abahlukahlukene, konke okuklanyelwe ukunethezeka okukhulu.
Ikamelo lokulala elihlukile nendawo yokuhlala evulekile yilokho okudingayo ngeholide eligxile ekuzijabuliseni kwase-Mediterranean elangeni nasebusuku ngaphansi kwezinkanyezi. Lungiselela ukudla kwakho ekhishini ngefriji elinegama lomkhiqizo, uhhavini ne-hob, i-microwave, umshini wokuwasha, nekhabethe, futhi ukujabulele kuvulande noma ku-veranda. I-Air-conditioning, i-TV engu-42 ’’, i-wifi yamahhala, nomshini wokomisa izinwele kwenza lokhu kuqashisa kube yindawo yokuphumula ethokomele ngasolwandle.
4.86 · 99 okushiwo abanye
Ibungazwe ngu-Sky Prime
•Hlangana & Ubingelele isevisi
•Izivakashi zisekela kukho konke ukuhlala kwazo
• Isevisi yowesifazane yamasonto onke •
Indawo yokubhukuda nokugcinwa kwengadi
Amasevisi atholakalayo uma ecelwa:
• Ukudluliselwa kwesikhumulo sezindiza namasevisi
e-Cauffeeur • Ukuqashwa kwemoto •
Ukuvakasha Okuzimele Nokuzilibazisa
Indawo yokubhukuda nok…
USky Prime Ungumbungazi ovelele